ताप्लेजुङ समाज युकेले ताप्लेजुङ अस्पताललाई ल्याव संचालनका लागि भवन र सोलार दिने | We Nepali
वीनेपाली | २०७२ वैशाख ९ गते १०:५९
ताप्लेजुङ समाजले निर्माण गर्न लागेको भवनको डिजाइन
लण्डन । ताप्लेजुङ समाज युकेले ताप्लेजुङ जिल्ला अस्पताललाई ल्याब सञ्चालनका लागि भवन निर्माण गरिदिने भएको छ ।
यस्तै, समाजले ल्यावमा अत्यावश्यक उपकरणहरु संचालनका लागि सोलार पनि जडान गरिदिने भएको छ ।
समाजले अस्पताललाई सहयोग गर्न गठन गरेको परियोजनाका टोली नेता रिटायर्ड मेजर भवानी पन्धाक र परियोजनाका परिकल्पनाकार तथा समाजका पूर्व अध्यक्ष डा. चन्द्र लक्सम्बा हालै ताप्लेजुङ पुगी सो भवनको शिलान्यास गराएका हुन् ।
ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङमा अवस्थित जिल्ला अस्पताल हातामा निर्माण हुने दुईकोठे सो भवनमा ल्याब र फार्मेसी रहने डा. लक्सम्बाले जानकारी दिए । भवनको लागत करिब १५ लाख रुपियाँ रहने बताइएको छ ।
यस्तै, हाल नियमित विद्युत आपूर्ति नहुँदा रक्त परीक्षण, एक्स रे जस्ता आधारभूत सेवा पनि नियमित हुन नसकेको स्थानियबासीको गुनासो सुनेपछि समाजले करिब साढे छ लाख रुपियाँको लागतमा सोलार जडान गरिदिने भएको छ ।
समाजले भवन शिलान्यास गर्नअघि काठमाडौँमा रहेको ताप्लेजुङ सरोकार समाज र ताप्लेजुङ सदरमुकाममा रहेका सर्वदलिय प्रतिनिधिहरु, नागरिक समाज, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अस्पताल विकास समिति र सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुसित अन्तर्क्रिया गरेको थियो ।
ताप्लेजुङ सदरमुकाममा आयोजित अन्तर्क्रियामा बोल्दै प्रोजेक्ट लिडर भुवानी पन्धाक
प्रमुख जिल्ला अधिकारी डमरुप्रसाद निरौलाको अध्यक्षतामा भएको सो अन्तर्क्रियामा समाजका तर्फबाट डा. लक्सम्बाले सो भवन बेलायतमा रहेका ताप्लेजुङबासी र ताप्लेजुङबीचको सम्बन्धको विन्दू भएको र सोको दिगो ब्यवस्थापन र सदुपयोग स्थानियबासीले गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा उपस्थित सबैले समाजलाई धन्यवाद दिँदै समाजले दिएको उपहारको संरक्षण र सदुपयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
सो भवनको उद्घाटन अागामी डिसेम्बरमा हुने योजना छ ।
समाजले स्थानियस्तरमा संयोजनका लागि जिल्ला रेडक्रसका अध्यक्ष गणेश अधिकारलाई फिल्ड डाइरेक्टर र जिल्ला वेलफेयर अफिसका वेलफेयर अफिसर जीवन मादेनलाई आर्थिक डाइरेक्टर नियुक्त गरेको छ ।
समाजले हरेक वर्ष १० हजार पाउण्ड संकलन हुने गरी युकेमा च्यारिटी कार्यक्रम गरी ताप्लेजुङको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
भविष्यमा अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी परियोजनाहरु पनि लैजाने डा. लक्सम्बाले जानकारी दिए ।
अन्तर्क्रियामा बोल्दै डा चन्द्र लक्सम्बा
ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङको तोक्मे डाँडामा केही साताअघि भएको आगलागीमा पीडितहरुलाई सहयोग गर्न समाजले राहत संकलन कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।
समाजका सचिव खेमराज मादेनको संयोजकत्वमा समाजले एक समिति गठन गरी राहत संकलन कार्यक्रमलाई तीव्र बनाएको छ ।
यसैबीच, आगलागीको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्केका डा. लक्सम्बाको टोलीले समाजलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । आगलागी पीडितलाई राहत सँगसैगै पटकपटक हुने आगलागीको समस्या निराकरण र नियन्त्रण गर्न जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको डा. लक्सम्बाले बताए ।
यसका लागि सुनसरीमा रहेको ताप्लेजुङबासीहरु, काठमाडौँमा रहेका ताप्लेजुङबासीहरु र युकेमा रहेका ताप्लेजुङबासीहरु मिलेर अध्ययन गर्ने निस्कर्ष निकालिएको पनि उनले बताए ।
‘सामान्य फायर ब्लाङकेट दिने र त्यसको प्रयोगको तरिका सिकाइदिने हो भने भविष्यमा अागलागीका घटना कम गर्न सकिने रहेछ’ – उनले भने ।